Indonesia oo xaqiijisay inay wada dhinteen shaqaalii saarna gujis la waayay | Berberanews.com
Home WARARKA Indonesia oo xaqiijisay inay wada dhinteen shaqaalii saarna gujis la waayay
Indonesia oo xaqiijisay inay wada dhinteen shaqaalii saarna gujis la waayay
Maydadka 53 Indonesian ah oo laga helay gujiskii degay
Indonesia-(Berberanews)-Burburka Markabkii Badda ee Indonesia ee la la’aa tan iyo Arbacadii ayaa laga helay sagxadda badda waxaana la xaqiijiyay dhamaan shaqaalihiisii ​​oo tiradoodu ahayd 53 ruux inay dhinteen.
Taliyaha ciidamada Milatariga ee Indonesia Air Marshal Hadi Tjahjanto ayaa sheegay axaddii ah.
Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii burburka la rumeysan yahay inuu ka yimid Markabka KRI Nanggala-402 laga helay isagoo dul sabeynaya meel qiyaastii laba mayl u jirta goobtii ugu dambeysay ee lagu yaqaan badda hoosteeda ee Bali Strait,
Markabka dagaalka ee Rigel ee Indonesia ayaa aagga ku baadhey sonar, kaas oo adeegsada mowjado dhawaaq si loo ogaado walxaha, iyo magnetometer, ayuu Tjahjanto ku sheegay shirkiisa jaraa’id.
Markabka MV Swift Rescue Reship oo ka yimid Singapore ayaa kadib wuxuu u diray gaadhi meel fog laga hayo (ROV) si loo helo muuqaal biyaha hoostooda mara, ayuu yidhi.
Markabka gujiska ah ayaa laga helay qoton hoose oo dheer 850 mitir (930 yaard) waxaana uu u kala jabay seddex qaybood, Taliyaha ciidammada badda ee Indonesia Adm. Yudo Margono ayaa yidhi.
Waxyaabaha ay kooxda baadi goobtu heshay waxaa ka mid ahaa suumanka quusitaank ee ka baxsashada badda hoosteeda, ayuu yidhi. “Qalabkan waxaa loo isticmaalaa oo keliya in lagu baxsado xaaladaha degdegga ah. Caadi ahaan waxaa lagu keydiyaa sanduuqa gudihiisa, laakiin maadaama aan bannaanka ka helnay waxaan aaminsanahay in shaqaaluhu ay xidhanayeen laakiin wax fursad ah ma helin,” ayuu yidhi
Margono oo ka hadlaysa sababta ayaa yidhu “tani ma aha qalad bini aadam, laakiin waa wax dabiici ah / deegaan,” laakiin may bixin faahfaahin dheeraad ah.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa tacsi u diray Axadii qoysaska shaqaalihii markabka, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen “waddaniyiinta ugu wanaagsan”.
“Musiibadan ayaa anaga oo dhan naga nixisay. Kaliya maaha qoysaska 53-ka shaqaale … laakiin sidoo kale dhamaan dadka reer Indonesia,” ayuu yidhi.
shaqaalii saarna gujis la waayay
Previous articleSomalia oo dalal shisheeye ku eedaysay nabadgelyo darrada
Next articleHadii dawladnimadu burburto waxa xoog yeelan doona argagixisada